Waa maxay duufaan baraf ah sidee se ku dhacdaa | Saadaasha Shabakadda
Duufaan baraf lihi waa baraf, baraf, ama roob dhagaxyaale leh xoog xoog leh oo sida caadiga ah laga soo saaro aagga buuraha dhaadheer. Aad ayey khatar u yihiin oo taariikhda oo dhan waxay ka geysteen masiibooyin dhowr ah magaalooyin waaweyn. Waxay kaloo sababeen geerida dad badan oo buur fuula iyo kuwa fuula.
Haddii aad rabto inaad ogaato astaamaha baraf dabaylaha iyo sida ay u samaysmaan, sii wad aqrinta 🙂
1 Astaamaha barafleyda
2 Maxaa Sababa Duufaanta?
3 Saamaynta khatarta ah
4 Barafka ku dhaca buuraha
4.2 Luminta aragga
4.3 Isu dheelitir la'aan
4.5 Culays maskaxeed
Barafleyda waxaa sidoo kale loo yaqaan baraf, baraf ama dabayl cad. Marka duufaan baraf ahi dhacdo, heerkulku badanaa wuu ka hooseeya 0 darajo. Mid ka mid ah astaamahooda ugu waawayn ee iyaga ka sii dhigaya kuwa halista badan ayaa ah dabaylaha xoog badan Kuwa buurta fuula waxay u geysan karaan khatar dhimasho, maadaama ay aragga ka dhigayaan mid aad u dhib badan oo heer kulkuna aad u hooseeyo.
Inta lagu jiro duufaanka, dabaysha daran awgeed, waxaad yeelan kartaa dareemo kuleyl oo gaaraya illaa -20 digrii. Dabayluhu way sii jiri karaan oo xasilloon yihiin wayna imaan karaan xawaare dhan 56 km / saacaddii ama wixii ka sareeya. Guud ahaan, duufaannada waxay soconayaan illaa 3 saacadood oo aragga waxaa loo yareeyay wax ka yar nus kiilomitir.
Maxaa Sababa Duufaanta?
Ku dhowaad meel kasta oo barafka barafka ah uu ku waxyeeleeyo duufaanta. Waa wax iska caadi ah inay ka dhacdo meelaha cirifka ah, gobollada ku dhow ama buuraha dhaadheer. Maanta, meelaha sida badan duufaanno badankooda lagu duubay ayaa tusaale ahaan ah Mareykanka iyo waqooyiga Arizona. Meelahan waxaa ka jira nidaam cadaadis hooseeya oo u dhaqaaqaya koonfurta haddii nidaam cadaadis sarreeya uu ka soo baxo Basin Weyn, duufaan ayaa dhici doonta.
Duufaanta Duufaanta sida caadiga ah waxay ka soo baxdaa dhinaca waqooyi-galbeed ee nidaamka duufaanka daran. Farqiga weyn ee u dhexeeya cadaadiska sare iyo kan hoose waa waxa dabaylaha ka dhiga mid xoogan. Waxaan xasuusnaano in dabayshu ka dhalanayso farqiga u dhexeeya hal dhibic iyo dhibic kale. Farqiga u badan ee ku jira cadaadiskaas jawiga, ayay sii xoogeysanaysaa dabeyluhu.
Dhanka kale, biyaha ku sii haray barafka jawiga waxay sameysmayaan kristal u eg kuwa kale. Sida kristantarrada barafka midoobaan, way samaysmaan barafka ilaa lix dhibcood. Intaas waxaa sii dheer, marka barafku da'o oo ay dabeyluhu aad u xoogan yihiin, muuqaalka ayaa kala bar la jaraya.
Marka la soo koobo, waxaad dhihi kartaa barafku waa isku dar xun oo baraf iyo dabayl ah.
Saamaynta khatarta ah
Sida iska cad, duufaanta barafku waa qatar hadba meesha aad joogto. Haddaad guriga joogto, waa lagu ilaalinayaa. Laakiin haddii ay ku qabato adigoo dibedda jooga khatar bay noqon doontaa. Haddii aadan qaadanin ilaalin, qabowgu wuxuu sababi karaa qabow iyo sidaas darteed, dhimasho.
Haddii aad gasho gawaarida gudaheeda, wareegga wareegga wuxuu noqonayaa mid gebi ahaanba aan macquul ahayn. Muuqaalka ayaa hoos loogu dhigay 0,40 kiilomitir iyo dabeylo dabeyl wata oo gaariga ku dhaca. Tani waxay u horseedi kartaa darawalku inuu jahwareeriyo oo uu shil ku dhammaado.
Marka barafleyda ay aad u kacsan yihiin waxay awoodaan inay sababaan cilado ku yimaada wareegyada korantada waxayna sababaan koronto la'aan. Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay dabeylo badan iyo baraf xoog leh ayaa waxyeeleeya fiilooyinka.
Barafka ku dhaca buuraha
Waxaan u qoondeynaynaa qayb dhammaystiran si aan u sharraxno xaaladda ay ku sugan yihiin dabeylaha roobka wata ee buuraha ku jira. Sidaan horeyba u soo sheegnay, dad badan oo buuraley ah, kuwa lugaynaya, iyo kuwa fuulaaba way ka dhinteen iyaga. Marka heerkulka waxay ka hooseeyaan -15 digrii oo aragga ayaa yaraaday, xaaladdu waxay noqoneysaa mid aad u khatar badan.
Markaad ku jirto buuraha dhaadheer, dabayshu waxay ku garaacdaa jirkaaga wax dhib ah oo ka duwan magaalooyinka. Maskaxda ku hay in magaalooyinka aan ku leenahay dhismayaal jaraya wareegga dabaysha. Intaas waxaa sii dheer, buurta waxaa ku jira cunsurro badan oo aan dhulka ku dhegneyn oo na garaaci kara. Tusaale ahaan, miraha barafka ee samaysma, laamo yaryar iyo dhagaxyo ay dabayshu dhaqaajiso.
Markuu wade buur fuulayo oo uu layaabay duufaanta, waxaa jira waxyaabo saameyn ku leh safarka.
Waxa ugu horreeya ee aad dareento markaad buur fuuleyso oo aad la yaabtay baraf baraf lihi waa farxad. Waxaan dareemi karnaa dhiirigelin si aan ugu soo dhaqaaqno iyadoo aan wajaheyno dhibaatooyinka taas ka dhalan kara. Tani way sameyn kartaa yaanan sifiican u arkin qatarta xaalada.
Haddii waqtiga aan buurta fuuleyno aynaan xirneyn muraayadaha wax ilaaliya, qalabka aan kor ku soo sheegnay ayaa nagu dhici kara. Hadday isha nagu dhufato, waxay sababi kartaa dhibaatooyin daran.
Isu dheelitir la'aan
Buurta waxaa ku yaal meelo cidhiidhi ah oo dheelitirku door muhiim ah ka ciyaarayo. Dabeylaha xoogan ee dabaysha ee uu keeno duufaanta waxay naga dhigi kartaa isku dheelitirnaan la'aan iyo dhicitaan. Sidoo kale, haddii ay si isdaba joog ah u saameyneyso wejigeenna iyo indhaheenna, waxay naga dhigeysaa mid aan dulqaad badan lahayn oo fiirsiga naga lumaya. Tani waxay noo horseedi kartaa inaan khaladaad sameyno. Waxaa si weyn lagugula talinayaa inaadan dhabarkaaga u jeedin dabaysha si shandadu aysan nooga adkaan culeyskeeda awgiis.
Farxad darteed waxaan dareemay bilowgii iyo aragti la'aan, waxaan kordhinaynaa kalsoonida. Tani waa sababta oo ah waxaan horteenna ku leenahay caqabad aan ka gudubno. Si kastaba ha noqotee, annaga oo aan lahayn aragti wanaagsan, waxaan lumineynaa tixraacyo gaar ah. Waad rumaysan kartaa inaad ku socoto dhabbaha saxda ah oo aad khaldan tahay. Muuqaalka oo yaraaday wuxuu inaga dhigayaa inaanu lahayn tixraacyo iyo, mustaqbalka fog, ku dhacdo marxalad niyad jab ah.
Haddii aan si buuxda ugu jirno duufaan, dabeecadda aan xilligan haysanno ayaa shardi u ah ka bixitaankeeda. Waa suurtagal in waqtigu xeelad nagu ciyaaro. Waxaan u maleyn karnaa in dhowr daqiiqo ay saacado noqon karaan. Xaaladdan oo kale waa inaad yeelataa go'aan adag.
Heerkulka hoose iyo dabaysha dabaysha, hypothermia wuxuu soo muuqanayaa waqti gaaban. Dharka ayaa umuuqda kuwa aan kululeyn, inkasta oo aan haysanno kumanaan lakabyo ah. Haddii qabowgu na soo gaadho, jidhkeennu wuxuu hoos u dhigayaa heerkulkiisa oo gaadhaya heerar khatar ah. Haddii qalabku aanu ahayn mid tayo leh ama aad qoyaan dhidid, kuleylka lumistiisa ayaa dhaqso u dhici doonta.
Ka hor roobdhagaxyaale buur ku taal, go'aanka ugu fiican wuxuu noqon doonaa in hoos loo dhaadhaco. Meel kasta oo aad u dhaadhacdo, illaa inta jooggeedu yaraanayo, khatartu way yaraanaysaa.
Macluumaadkan waxaad diyaar u noqon doontaa inaad la kulanto baraf baraf wata.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay duufaanku sidee buu ku dhacaa